GUARDIAN: 50 Ruux Oo Shacab Ah Ayaa Dhimasho & Dhaawac Ku Noqday Duqeymaha Cirka Ee Shisheeyaha – Shabakadda Amiirnuur
January 24, 2018 5:11 pm by admin Views: 286
Dowladaha Afrikaanta ee Mareykanka kala qeybqaadanaya dagaalka ka dhanka ah Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa iyagana fuliyey weeraro dhowr ah oo xagga cirka ah kuwaas oo iyagana geystay qasaare culus.
((12 Bilood Gudahood))
Inta badan dhamaan duqeymahan waxaa la sheegay in lagu beegsanayey Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah farac taabacsan Al-Qaacida oo muddo ka badan 10 sano u dagaalameysa sidii dowlad Islaami ah looga dhisi lahaa Soomaaliya, balse qasaaraha ugu badan wuxuu soo gaaray dadka shacabka ah ee aan hubeysneyn.
Wargeyska the Guardian wuxuu soo uruuriyey sidoo kalena baaritaan ku sameeyey duqeymaha 12-kii bilood ee la soo dhaafay ka dhacay Soomaaliya, iyo wararka ku saabsan duqeymahan ee ay isla dhexmarayeen warbaahinada gudaha, Iyadoo hubineysa sheegashooyinka warbaahinta gudaha, sidoo kalena kaashaneysa qiraalka saraakiisha reergalbeedka, kuwa dowlada, shaqaalaha caafimaadka, goob-joogeyaal iyo ehelada dhibaneyaasha.
Shan weerar oo dhacay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii July, waxaa lagu dilay laguna dhaawacay in ka badan 50 ruux oo shacab ah sida uu tilmaamayo Wargeyska, Waxaana weeraradaas laba ka mid ah ku lug lahaa diyaaradaha Mareykanka. Waxaa sidoo kale jira Qasaaraha kale ee dheeraadka ah oo ay sababeen duqeymo kale oo aan la soo tabin.
Bishii August, todobo xubnood oo ka soo jeeda hal qoys, ayna ku jiraan caruur ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay koonfurta Jubooyinka sida ay sheegayeen ehelada dadka la laayey laakiin saraakiishu waxay ku andacoonayaan in dhamaan dadka la laayey ay ahaayeen argigixiso. Bil ka sii horeysay, afar ruux oo ay ku jiraan saddex caruur ah ayaa la dilay, 8 kalena waa la dhaawacay ka dib markii duqeyn lagu beegsaday xaafad ku taalla meel u dhow magaalada Kismaayo sida ay sheegayaan ehelada dhibanayaasha iyo dad goobjoogeyaal ah. Duqeymuhu waxay sidoo kale laayeen cadad badan oo xoolo ah, waxayna sababeen burbur xoogan oo soo gaaray dhul-beereedka.
Inkastoo kororka ku yimid duqeymihii u dambeeyey ay yihiin kuwa aanan horay loo arag, haddana wuxuu wargeyskan tilmaamayaa in isticmaalka awoodda xagga cirka ah ee Mareykanka ay ku soo badaneysay Soomaaliya tan iyo ka hor inta uusan Trump noqon madaxweynaha dalkaasi.
Warbixin ay dhawaan sameysay QM waxay ku sheegtay in 74 duqeyn oo xagga cirka ah ay dhaceen intii u dhexeysay January 2016 iyo October 2017, kuwaas oo sababay qasaaraha 57 ruux laakiin warbixintu waxay qasaaraha ugu badan dusha ka saartay dowladda Kenya oo ay sheegtay in ay diyaaradaheedu fuliyeen duqeymaha ugu badan ee geystay qasaaraha soo gaaraya muslimiinta aan hubeysnayn ee shacabka loo yaqaano.
Dowladda Kenya waxay kumanaan ciidamo ah iyo saddex diyaaradood oo helicopterada weerarka ku biirisay isbaheysiga Afrikaanta ee dagaalka kaga jira Soomaaliya balse waxaa la rumeysan yahay in kumanaan kale oo dheeraad ah oo ka madax banaan Isbaheysigan ay ka joogaan gobolada saaran xadka, sidoo kalena mararka qaar ay duqeymo iskood ah ka fuliyaan deegaanada saaran xad beenaadka sida uu sheegayo Wargeyska The Guardian.
Kororka lama filaanka ah ee ku yimid adeegsiga awoodda cirka ah ee Mareykanku u isticmaalayo Soomaaliya ayaa timid kadib markii la tuuray xeer ay sheegeen in markii hore uu xadidayey bartilmaameedyada si loo yareeyo qasaaraha shacabka iyo go’aan dhawaan ka soo baxay maamulka Trump kaas oo saraakiisha Mareykanka ee gobolka siinayey awood dheeraad ah oo ay ku amri karaan weerarada si ka duwan halkii markii hore amarka laga sugi jiray aqalka cad.
Ibraahim Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah dadka deegaanka Ilimey oo ah deegaan qiyaastii 130KM koonfurgalbeed kaga beegan Muqdisho ayaa Wareysi Telephone oo uu siiyey Guardian ku sheegay in ugu yaraan shan qof ay ku dhinteen laba kalena ku dhaawacmeen duqeyn ka dhacday deegaanka lixdii bishii December ee la soo dhaafay.
“Beeraleydu waxay fadhiyeen maqaayad shaaha laga cabo oo ku taalla deegaanka Markii ay diyaaradu soo dulmareysay deegaanka, sidaas ayeyna ku duqeysay. Qaar ka mid ah dhibanayaashu wadada ayey marayeen, halka kuwo kalena ay gudaha maqaayadda ku cabayeen shaah casariyo ah. Shan ruux ayeyna halkaas ku dileen. Dadka ay dileen ma ahan Al-Shabaab ee waxay dilayaan dadka shacabka ah” ayuu yiri.
Bishii Oct ee la soo dhaafay, diyaaradaha Mareykanku waxay duqeyn ka geysteen meel u dhow deegaanka Awdheegle, halkaas oo ay sheegeen in uu ka socday dagaal u dhexeeyey Al-Shabaab iyo askarta dowladda, balse duqeyntaas waxay dadka deegaanku sheegeen in lagu dhaawacay ugu yaraan 8 ruux oo shacab ah. Nin lagu magacaabo Muuse Xiirey oo ah oday dhaqameed ayaa sheegay in saddex ruux oo dumar ah, hal cunug iyo afar rag ah oo qaba dhaawacyo kala duwan loo gudbiyey Isbitaalka Daaru-Shifa ee magaalada Muqdisho ka dib markii gantaal lala beegsaday gurigooda.
“Waxay ahaayeen dad isugu jira Beeraley iyo Xoola Dhaqato, ma ahayn Al-Shabaab” ayuu yiri odaygan 56 sano jirka ah ee uu soo xiganayo Wargeyska. Mid ka mid dhaqaatiirta oo lala xiriiray ayaa isna sheegay in ay daaweeyeen laba rag ah iyo haweeney ku dhaawacmay duqeyn ka dhacday inta u dhexeysa Awdheegle iyo Bariire. Mareykanku waxay sheegteen in hal duqeyn ay maalintaas ka fuliyeen meel qiyaastii 35 mile u jirta Muqdisho.
Dhacdada saddexaad waxay ka dhacday tuulada la yiraahdo Tarako oo u dhow xad-beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya taas oo dhacday wax yar un ka dib markii ay ciidamada Kenya isaga baxeen deegaanka. Goob-joogeyaal ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay beegsadeen Barkad biyaha laga cabo, ayna halkaas ku dileen 20 neef oo geel ah, kuna dhaawaceen ilaa afar ruux oo xoola dhaqato ah.
Weerarkii Tuulada Axmad Yare
Intii u dhexeysay 16-ka iyo 17 August, Mareykanku wuxuu sheegtay in uu dilay 7 dagaalyahan oo ka tirsan Mujaahidiinta Al-Shabaab ka dib saddex duqeyn oo ay ka fuliyeen Jubada dhexe, laakiin dadka deegaanka, Warbaahinta gudaha iyo iclaamka Al-Shabaab intuba waxay sheegen in 7 ruux oo shacab ah lagu dilay duqeymahaas oo ka dhacay tuulada Axmad oo qiyaas ahaantii 15Km u jirta degmada Jilib.
Haweeneydan waxay sheegtay in adeerkeed uu ahaa nin beeraley ah, uuna sidoo kale ahaa Sheykh iyo Imaam laga yaqaano deegaanka, islamarkaana uusan ahayn Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab sida ay u dhigeen Saraakiisha DF.
Nin lagu magacaabo Cabdi Nuur Maxamed oo warfaafinta u qaabilsan maamulka ka jira Kismaayo ayaa wargeyska u xaqiijiyey in ay ka warhayeen duqeyntaas , ayna geysteen diyaaradaha dagaalka ee Kenya, isagoo qiray in lagu laayey dad shacab ah.
Falanqeeyayaashu waxay walaac xoogan ka muujinayaan in weeraradan aan kala soda lahayn ee Mareykanka iyo xulifadiisu ka wadaan Soomaaliya ay majaxaabiyaan kalsoonida yar ee dowlada iyo isbaheysiga shisheeye uu ku leeyahay wadanka, -waaba haddii ay kalsoonida u hartaye- uuna sidoo kale sii xoojinayo taageerada, isku soo dhawaanshiyaha iyo kalsoonida ka dhexeysa shacabka iyo Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, maadaama dagaalku uu yahay mid ku saleysan mabaadi’ islamarkaana aanan la kala jecleyn Soomaalida marba haddey ashahaadanayaan.